News - သတ္တုစပ်စစ်ထုတ်သည့်ဒြပ်စင်အကြောင်းအသိပညာ
သတ္တု sintering filter ကိုဒြပ်စင်အကြောင်းကိုအသိပညာ
၁။ Sinterered filter element အတွက်ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းရှိလား။ ငါစံ filter ကို element ကိုဝယ်နိုင်ပါသလား?
A: စိတ်မကောင်းပါ၊ စစ်ထုတ်သည့် filter element သည်ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သောထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သောပမာဏ၊ ပုံစံ၊ ပစ္စည်းနှင့်ဖောက်သည်မှသတ်မှတ်ထားသော filter တန်ဖိုးတို့၏အသေးစိတ်တန်ဖိုးများအရထုတ်လုပ်သည်။
2. filter ကိုဒြပ်စင် sintering များအတွက်အဘယျသို့ပစ္စည်းများရွေးချယ်နိုင်ပါသည်?
A: ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ၊ သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်များဖြစ်သည်။ ကြေးနီကိုစစ်ထုတ်သည့်ဒြပ်စင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အခြားသတ္တုအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်သတ္တုစပ်များကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရင်းမှာမတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်များဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောမာကျောမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောချေးခြင်းသို့မဟုတ်အပူချိန်မြင့်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သံမဏိသည်၎င်း၏အပူခံနိုင်မှုနှင့်ချေးခြင်းကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်နီကယ်သတ္တုစပ်များကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီသတ္တုစပ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးမြင့်မားခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်, ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်
3. အဘယ်အရာကိုသတ္တု sintering filter ကိုဒြပ်စင်၏ဒီဇိုင်းအတွက်အာရုံစိုက်ခံရသင့်ပါတယ်
အဖြေ: filter element ကိုရွေးချယ်သောအခါ filter medium ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ filter မှ ဖြတ်၍ စီးထွက်သောနှုန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုခြင်းစသည်တို့ကိုဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုသည်မတူညီသော filter များလိုအပ်သည်။ ဒီဇိုင်းတွင်အောက်ပါအချက်များကိုသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် -
၁) ပေါက်အရွယ်အစား - မိုက်ကရိုဖုန်းအတိုင်းအတာလည်းရှိသည်။ ပေါက်အရွယ်အစားသည်သင် filter လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် media ၏အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်သည်
၂) ဖိအားကျဆင်းမှု - ဖိအားဆုံးရှုံးမှုမှတစ်ဆင့်အရည်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်၎င်းကိုစစ်ထုတ်သည့်ထုတ်လုပ်သူထံပေးရမည်။
၃) အပူချိန်အကွာအဝေး - filter element ၏အလုပ်လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုတွင်မည်မျှမြင့်မားသနည်း။ သင်ရွေးချယ်သော filter element အတွက်ရွေးချယ်ထားသောသတ္တုစပ်သည်အလုပ်လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်၏အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။
(၄) Strength: Sinter filter filter များသည်မြင့်မားသောခွန်အားအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ရှေ့သို့ (သို့) ပြောင်းပြန်စီးတွင်တူညီသောအစွမ်းရှိသည်။
၁) လျှောက်လွှာ - ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသုံးခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်းတန်ဖိုးအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်
၆။ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်သည်းခံမှု
သံမဏိ filter, မော်တော်ကား filter ကို, စက်မှုဓာတ်ငွေ့ filter, ရေစစ်ခြင်း, လေစစ်စစ်ထုတ်စက်များ, သံမဏိလေစစ်ထုတ်ခြင်း,